Pagelines 2.0 weghachitagoro WordPress Them na Ecommerce
Tọzdee, Disemba 8, 2011 Douglas Karr
WordPress gara n'ihu na-arụ ọrụ dị egwu… ọ bụghị naanị imelite usoro ikpo okwu ha kama n'ụzọ ha meghere ya n'ezie maka njikọta ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye na Gburugburu maka ikpo okwu dị ebe niile, ha dịkwa ọnụ ala. Ulo oru ohuru emepeputala gburugburu ikpo okwu, Pagelines bu otu n’ime ha! Companylọ ọrụ ahụ dị nnọọ mpako ịkpọsa mwepụta nke Pagelines 2.0, usoro isiokwu na-agbanwe WordPress. Pagelines 2.0 na-etu ọnụ maka atụmatụ ndị a: Drag &
Dochie WordPress Search na Google Custom Search
Ka anyị chee ya ihu, Nchọgharị WordPress dị nwayọ na ezighi ezi. Obi dị m ụtọ, Google na-agba ọsọ ọsọ ma na-ezi ezi. Na mgbakwunye, Nchọpụta Omenala nke Google agbanweela ka etinye ya na blọgụ nke gị (ma ọ bụ weebụsaịtị). Permalinks na Google Custom Search Maka saịtị nwere permalinks dị ka nke m, ekwesịrị m ime mgbanwe ọzọ, n'agbanyeghị. Ekwesịrị m ime ihe a na mpempe aha karịa ịnye URL niile